Chaparral (ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ) - Hello Sayarwon
Chaparral (ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Chaparral (ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ)
Chaparral (ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ) ကဘာလဲ။
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အရွက်ကိုဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးပါ။ ဘေးကင်းမကင်းစိုးရိမ်စရာနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။
အအေးမိခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်းအပါအဝင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ
မြွေကိုက်ခြင်းကြောင့်နာကျင်ခြင်း များအတွက် သုံးတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သွေးတွင်းသကြားထက်နည်းစေသော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း၊ အကျိတ်များအတွက်သုံးနိုင်ခြင်း တို့အတွက် လေ့လာမှုတွေတော့ရှိပါတယ်။ အပင်တွင်ပါဝင်သော ဓါတုပစ္စည်းများမှာ antioxidants သတ္တိရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ပစ္စည်မြောက်မြားစွာပါဝင်ပြီး အထင်ရှားဆုံးကတော့ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိရှိသော nordihydroguaiaretic acid ဖြစ်တယ်။
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ထိုဆေးဘက်ဝင်အပင်လုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်လို့ လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ။် ဒါပေမယ့် သွေးတွင်းသကြားထက်နည်းစေသော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း၊ အကျိတ်များအတွက်သုံးနိုင်ခြင်း တို့အတွက် လေ့လာမှုတွေတော့ရှိပါတယ်။
အပင်တွင်ပါဝင်သော ဓါတုပစ္စည်းများမှာ antioxidants သတ္တိရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ပစ္စည်မြောက်မြားစွာပါဝင်ပြီး အထင်ရှားဆုံးကတော့ antioxidant ဂုဏ်သတ္တိရှိသော nordihydroguaiaretic acid ဖြစ်တယ်။
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
အသည်းပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ရှားရင်ကောင်းပါတယ်။ FDA က မသုံးသင့်တဲ့ဆေးပင်တစ်မျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကလေး၊ ကိုယ်ဝန်သည်၊ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်သော အဆိပ်မိခြင်း၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ် အသည်း ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းတွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
သွေးကြဲဆေး – ထိုဆေးများရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို များစေပါတယ်။
MAOIs – MAOIs တွေရဲ့ အာနိသင်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
ALT, AST, bilirubin ပမာဏ၊ ဆီး bilirubin ပမာဏတွေကို တက်စေပါတယ်။
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ခရီရိုဆုတ် ခေါ် သစ်ဆီ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဆေးတောင့်၊ ဆေးပြား၊ ဆေးရည်၊ လက်ဖက်ရည်။
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. page 160